Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2189 - 2190 | XperimentalHamid
funda Isahluko 2189 - 2190 yenoveli Unyana osisigidi eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Intliziyo kaWarnia yayigcwele ukubambeka ngexesha.
Ngokwendalo wayemthiyile uTianming kwaye Hlonipha utata kabawo duo.
Nangona kunjalo, akafuni kuthatha isigqibo malunga nobomi babo kunye nokufa kwabo. Ngokwenene akafuni ukubabulala.
Kwelinye icala, kungenxa yokuba bonke bazizalamane emva kwayo yonke kwaye banxulumene ngegazi;
Kwelinye icala, ukhathazekile kukuba ukwenza izinto ngendlela eyoyikisayo kungamenza buhlungu uTatomkhulu Ingoma.
UWarnia umazi kakuhle utat'omkhulu. Uyazi ukuba utat'omkhulu ungqongqo, kwaye ngeli xesha naye umthiyile kakhulu umalume nomzala wakhe.
Nangona kunjalo, wayesazi ukuba entliziyweni kaTatomkhulu, igazi lihlala lijiyile kunamanzi, kwaye ngekhe athembe ukohlwaya umalume nomzala wakhe ngokufa.
Ecinga lento, wajonga uCharlie wathetha ngokunyanisekileyo: “Master, nangona benze izinto ezininzi ezingalunganga, basuka kusapho lweNgoma kakade kwaye bazizalamane zam zegazi. Ndiyathemba ukuba ungabagcina bephila… .. ”
Kwakugqityiwe ukuthethwa lento, bobathathu abantu ababelapho bakhupha isiqabu.
Ukongeza kwiTianming kunye neNhlonipho, kukwakho nengoma uJimo, utata weNgoma.
Nangona iTianming kunye neMbeko akufuneki zithethe kakhulu, kubo, amazwi kaWarnia ayafana nokugcina ubomi babo.
KuMnu.Ngoma, waye esoyika ngokwenene ukuba uWarnia angambulala utata kunye nonyana ngenxa yenzondo.
Kodwa phambi kukaCharlie, akazange alinge ukuyenza icace into yokuba ufuna ukukhusela ubomi bukatata nonyana, ke ubomi kunye nokufa kukatata nonyana kwakusezandleni zikaWarnia.
Ngoku, xa esiva uWarnia esithi, wayekhululekile ngokwendalo.
Tianming kowtows ngakuWarnia ngovuyo, kwaye wakrwitshwa: “Warnia, umalume wakho uyakuhlala ewakhumbula amazwi akho anobubele. … ”
UMhlonishwa naye wakhala wathi, “Warnia, enkosi ngobubele bakho…”
UCharlie ebesilindele esi siphumo kwakudala, wajonga kuTianming noHonor, ababezele ngabantu abasindileyo, wathi ngokuzolileyo: "Kuba uWarnia ethe mandikusindise, bendizimisele ukumhlonipha."
Ethetha ngale nto, uCharlie wathetha kabukhali wathi: “Kodwa njengoko le ntetho isitsho, izono eziphilayo azinakuphepheka, kwaye nezono zokufa kunzima ukuzixolela. Nangona ninokusinda nina nobabini, kodwa kusafuneka nisamkele isohlwayo esaneleyo! ”
UTianming ungxamile wathi, “Mfundisi! Mna noMhlonishwa sizimisele ukuya kwisikhululo samapolisa ukuza kuzinikezela ngoku ukuze umthetho uthathe isigqibo ngayo yonke into! ”
INhlonipho iphinde yanqwala kaninzi: “Ewe, Mfundisi, mna notata wam sizakunikezela ngoku! ngoko nangoko! ”
UCharlie wahlekisa wathi: “Nina nobabini nicinga kakuhle kakhulu. Vumelani nina nobabini ninikezele kwaye niphumelele iyelenqe lokunikezela. Ngale ndlela, isigwebo ngokwendalo siya kuba lula. ”
UTianming ungxamile wathi: “Nkosi, unentliziyo enkulu. Nokuba sinecebo lokuzinikezela, kuya kufuneka sigwetywe iminyaka elishumi ubuncinci. ”
UCharlie wawangawangisa isandla esithi: “Uyilibale, unganikezeli, akukho sidingo sokuyisombulula ngamajelo asemthethweni.”
Akuva oku uTatomkhulu Ingoma, wabuza, “Mphathi, uthetha ukuthini?”
UCharlie uthe: “Andikholelwa kutata nonyana, nokuba bathunyelwe entolongweni, bangasongela ubomi bukaWarnia kwixesha elizayo, ndiye ndacinga ngesinye isisombululo esinokugcina uBomi babo, nesinokuphelisa izisongelo zabo kuWarnia. ”
UTianming wabuza ethukile, “Nkosi, wena… sithini isisombululo…”
UCharlie wathethela phezulu wathi: “Tianming, ndiceba ukukuthumela kude kude, ndikuthumele kwindawo engaqhelekanga ukuze ungaphinde ubuye.”
Bathe bakuva oku uTianming noHlonipho, bacinga ngotata wosapho nonyana ka-Wei behlangene ezingqondweni zabo okokuqala…
Ngenxa yokona uCharlie, utata kunye nonyana basesezantsi kweNtaba yeChangbai.
Obu busika bubanda kakhulu. Iqondo lobushushu elisezantsi kweNtaba yeChangbai yi -20 ukuya kwi-30 degrees ngaphantsi kwe-zero okanye nangaphantsi. Ngokwenene abayazi ukuba utata kunye nonyana basinda njani kude kube ngoku.
Ecinga ngemeko-bume engqwabalala nengenaxoleli emazantsi entaba yaseChangbai, uMhlekazi walila wathi, “Mfundisi, ndiyakucela ukuba uphakamise izandla usiye ejele. Asifuni ukuya kwindawo ebandayo yeNtaba yaseChangbai… .. ”
UCharlie wahlekisa wathi, “Ungakhathazeki, andizukuvumela ukuba uye kwiNtaba yaseChangbai. Ndinawo amanye amalungiselelo endinenzele wona. ”
Emva koko, wakhwaza wathi: “Craven, ngena.”
Ngaphandle komnyango, uIsaac Craven wasondela kwangoko wabuza ngentlonipho, "Nkosi, ufuna ntoni?"
UCharlie uthe, "Issac, ndivile ukuba ubukade utyale imali kwimigodi yedayimani eAfrika ngaphambili?"
"Ewe." UIsaac Craven wanqwala, wathi: "Ndatyala imali kumgodi wedayimani, kwaye loo dayimani iseSierra Leone, eAfrika."
UCharlie wambuza: "Kunjani okusingqongileyo phaya?"
U-Isaac Craven wancuma wathi: “Le ndawo yesiporho iseNtshona Afrika, lelinye lawona mazwe angahambelanga phambili ehlabathini. Ibekwe kwindawo yokuqala kwihlabathi iminyaka emininzi ilandelelana. Ihlwempuzeke kakhulu kangangokuba awukwazi nokucinga… ”
“Kwaye iimeko zemozulu zale ndawo yesiporho nazo zimbi kakhulu. Yeyesimo sezulu esikwimo yetropiki. Iqondo lobushushu liphezulu kakhulu unyaka wonke. Obona bushushu bungaphezulu kwe-40 degrees, kwaye obona bushushu buphantsi yi-15 degrees. Imanzi kwaye iyatshisa. I-eczema yenzeka, kwaye loo ndawo yesiporho igcwele iingcongconi nazo zonke iintlobo zezifo ezosulelayo. Ukuba bekungekho kwimigodi yedayimane kuloo ndawo, ndiyoyika ukuba ingadlula!
Xa iTianming kunye neHlonipho bakuva oku, babesele bengcangcazela luloyiko.
Encumile, uCharlie wathi: "Ngokutsho kwakho, le yindawo elungileyo yokuthinjelwa!"
Emva kokuthetha loo nto, wakhomba kuTianming no-Honor wathi ngoncumo: “Kulungile, Craven, uthumela utata nonyana eSierra Leone ubusuku bonke, cwangcisa umgodi wakho wedayimani, mabahambe baye emlanjeni nabasebenzi basekuhlaleni bathathe idayimani, jonga ukutya nendawo yokuhlala, kodwa ungaze ubanike nesenti yomvuzo. ”
“Ukongeza, qiniseka ukuba ukutya kunye neemeko zokuhlala zifana ncam nezezo zabasebenzi balapha. Kwangelo xesha, baya kuthunyelwa ukuba babeke iliso kubo ukuze kule minyaka ingama-20 izayo, bangaphindi babuye kwakhona. Malunga nokuba bangabuya kwiminyaka engama-20, kuxhomekeke kwindlela abasebenza ngayo kule minyaka ingama-20. ”
Kamsinya nje ukuba la mazwi aphume, uTianming no-Honor baphantse baquleka.
UTianming wakhala wathi, “Nkosi, Mfundisi, nceda usisindise! Endaweni yesiporho eSierra Leone, mna notata siza kufa sisifo segazi okanye ezinye izifo ezosulelayo kwiinyanga nje ezimbalwa ubuninzi. Kungcono sidubule siye ngqo phezulu. ”
UIsaac Craven wancuma wathi: “Mnu. Ingoma akufuneki ixhala. Nangona iimeko zendalo kunye nezabantu e-Afrika zibuyela umva kakhulu, thina somashishini baseTshayina batyale imali e-Afrika sisengabantu abanobuntu. Sinoogqirha abaqeqeshiweyo kuyo yonke indawo yokwakha. , Amayeza akho anele, nto leyo enokuqinisekisa impilo yakho. ”
INhlonipho yakhala kakhulu isithi: “Andifuni kuya eAfrika, andifuni ukuya eSierra Leone, andifuni ukuya kulaa ndawo yesiporho ukuze ndiyokumba iidayimani! Nceda undithumele entolongweni! Ndisisaphuli-mthetho, vumela umthetho undohlwaye, nceda… ”
UTianming uqhubeke nokucela ngeli xesha: "Nkosi, yiba nenceba, masizinikezele!"
UCharlie wahlekisa: “Ngaba ucinga ukuba usenalo ilungelo lokukhetha? Liphupha nje! ”
Kwangoko, wajonga uIsaac Craven waza wayalela: “Old Chen, vumela abo bakuphetheyo ubahlise kwangoko, kwaye ulungiselele inqwelo moya ukuba ibase eSierra Leone ngokukhawuleza. Eyona nto ingcono ukuba bangahamba emva kwemini! ”
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2187 - 2188
Isahluko se-2992- 2993 seDish esona siNgcono kwiNoveli yeCold
Iingcinga ezi-2 ngo “Millionaire Son in Law Law Chapter 2189 - 2190”
Epreli 10, 2021 kwi-4: 07 PM
Más capítulos 2191 hasta el capítulo wokugqibela
Epreli 10, 2021 kwi-3: 19 PM
Muy buena novela, me encanta leerlo